Umtya weCity weCoil China Manufacturer
Inkcazo:Umdibanisi we-Decoiler Straightener ohlangeneweyo,I-Decoiler Cum Straightener Cum feeder,Isongezo se-Decoiler Straightener yoMatshini wokushicilela
Home > Imveliso > Umxhasi we-Decoiler Straightener Feer > Amandla oNcedo lwensimbi ephezulu yamandla > Umtya weCity weCoil
Umzekelo No.: MAC4-F
Umtya weCity weCoil Ayifuni iluphu kunye nomhadi kuba i-coil ibekwe ngaphezulu komqeshi kunye neendlela zokondla . Umgca wecompact unezakhono ezifanayo ezifanayo kunye nomgca oqhelekileyo kodwa uhlala kwindawo encinci yomgangatho kwaye, rhoqo, ngokusebenza okulula. Nokuba ubukhulu bayo obuncinci-bungaphantsi kwesiqingatha sobukhulu bomgca oqhelekileyo-iyakwazi ukuphatha izixhobo ezinqinileyo nezomeleleyo. Ezi sept-space savers zinokuqhubekeka iikhoyili ziye kuthi ga kwiitoni ezingama-20 ububanzi buye kuthi ga kwi-1800mm kunye nobunzima phakathi kwe-0.6-6.0mm.
Umtya wokuCoca uCwecwe weCrafact awasebenzisi nje kuphela indawo ngokufanelekileyo, zikwabalulekile nasekunciphiseni amazinga okuqhekeka kunye nokuphucula iinxalenye kunye nokusebenza ngokukuko kwesixhobo. Kungenxa yokuba umtya wokuhambisa i-Compact Coil Line unezinto ezimbalwa kwaye izinto akufuneki ukuba zihambe ngokuhamba njengoko zisemgceni we-coil ende, loop, kunokwenzeka ukuba ukuphazamiseka okuncinci kuya kwenzeka ngexesha lenkqubo yoku stamp kwaye izixhobo ziya kunxiba kancinci.
Ezona Nxalenye ziphambili zeCandelo leNkongozelo yeCoil yoMthombo njengezantsi:
I-MAC4 iCompact Coil feed Line isebenza kumzi mveliso wabathengi bethu.
Umtya wokuDibanisa i-Coil Coil ngokwenza umgca wokutya we-bracket coil sheet.
Lo matshini usebenza esebenzela omnye umzi-mveliso wabathengi bethu, bavelisa indawo zohlobo olu-U kunye noMgca weNkxaso-mali yeCoil.
Umdibanisi we-Decoiler Straightener ohlangeneweyo I-Decoiler Cum Straightener Cum feeder Isongezo se-Decoiler Straightener yoMatshini wokushicilela Umdibanisi we-Decoiler ohlanganisiweyo Umshini we-Decoiler Straightener Machine Ukudibanisa i-Decoiler Straightener Umxhasi we-Decoiler Straightener Feer 3 kwi-1 Umxhasi we-coil Straightener ngeDoiler